University of Cape Town | Emagister
Reviews on University of Cape Town (100)
What I would highlight: Konke kulungile.
What I would highlight: I Waterfront yindawo enhle ukuchitha isikhathi sakho ku ntambama ehlobo, ungakwazi ngiqhathanise amanani ezinto, ubuke ama-movie kodwa amathilomu ebiza kakhulu. Kukhona amathilomu enhle endaweni ephakathi Green Point futhi Sea Point. Indlela engcono kakhulu ukuchitha isikhathi sakho ukuze uxoshe ngasogwini ezindaweni ezifana Hout Bay noma Muizenberg. Kufanele ukufinyelela imoto ukujabulela Cape Town ngoba ezindaweni eziningi ezijabulisayo zikude campus. Indawo ezungeze campus kwaba bezijabulisa Nokho. Kukhona phakathi Woodstock futhi Plumstead ikakhulu uhlalwe abafundi
What I would highlight: I Victoria Waterfront has zonke yezitolo, izindawo zokudla, kanye nomculo ukuthi ungase ucele.
What I would highlight: lula kimi.
What I would highlight: esimnandi kunazo zonke ekuphileni kwami.
What I would highlight: Ngiyithandile.
What I would highlight: inyuvesi Omkhulu!
What I would highlight: Wonke umuntu on campus angakhuluma english ngakho akuzange kube nzima kangaka ukuxhumana nabanye. Futhi kukhona isibalo ebanzi abafundi angaphandle on campus. Abanye abantu eMzini wakhuluma kuphela tounge lwabo lwendabuko futhi ngimpofu english kodwa ukuthinta ke kulula ngempela ukuba wazi ukuthi yini abazama ukukusho. Kukhona njalo omunye ezimisele ukusiza.
What I would highlight: UCT yokwehluleka ukwenza okuthile noma aphelelwe yisikhathi esewonke structureBeautiful, Good Facilities ucwaningo, Afrika standardPoor ukuphatha okuhle ababhikishi abanodlame umfundi ngoba eminyakeni emine eyedlule, ukubandlulula yesikhungo namanje created.I saba nesikhathi omkhulu UCT kodwa akazange ukuphatha bakhona ukuze aphothule iziqu zami. Nakuba le nyuvesi uqhuba i standard emangalisayo lemfundo eMinyangweni eminingi futhi ine omuhle kakhulu ucwaningo izindawo, udaba ukuguga ukucwaswa yesikhungo uhlanga ngenxa umlando amazwe wobandlululo, namanje yinkinga enkulu. Lokhu siye saba buthaka takhiwo eziningi degrees - ikakhulukazi humanities futhi Ubuciko, futhi ubude besikhathi lami kwakukhona ukuthi izifundo zami babelokhu iphazamiseke ngenxa umbhikisho wabafundi. Njengoba ngifunda e-Ubuciko Nezabantu neminyango, ukuphazamiseka lwalunamandla kakhulu futhi kwadingeka ngigibele ikhefu ngenxa yokungabatholi ukwazi ukubhekana ezindaweni enobudlova futhi militirised. Angiqiniseki uma lezi zinkinga ziyoxazululwa, futhi okwamanje ezenzeka eNingizimu Afrika Amanyuvesi Lilonke.
What I would highlight: Njengoba abahlala eKapa kancane ngakho, ngangingafuna uhlala endlini ethile ebhishi.
What I would highlight: Thatha Afrika Dance !!! ESIFUNDWAYO FOR UHLOLO YOKUGCINA. Ukuhlolwa kokugcina nibaluleke okungenani 50% izinga lakho lokugcina futhi zivamise Tindzaba ebhaliwe. Udinga ukwazi okuqukethwe Yiqiniso ukwenza kahle.
What I would highlight: Kwadingeka a isipiliyoni ongaziwa ezifundweni ngenkathi eThekwini. Ngathatha izifundo ezintathu: owodwa-anthropology, omunye ezifundweni zenkolo, nelinye deejaying. Inkambo anthropology wayempofu kakhulu futhi kwaba pretty okuningi engenamsebenzi ngaphandle esimweni ezinhle zokuhlangana nokukhuluma abafundi bendawo. I wezifundo zenkolo Yiqiniso kwaba mnandi futhi wathatha umbono ngokugqamile yaseNingizimu Afrika yezinkolo eziningi kuleli zwe, kuhlanganise African Traditional Religions, okuyinto Ngangingakaze ithuba lokufunda mayelana ngaphambili. Ekugcineni, inkambo deejaying kwaba Lekker (Afrikaans I-cool noma amnandi). Sengiyakwazi ukubeka ndawonye imishini deejaying kanye eziyisisekelo amakhono deejaying. Mhlawumbe ingxenye engcono kakhulu isigaba (okuyinto ingenye ezimbili kuphela izifundo ezinjalo emhlabeni) wukuthi kwesigamu lokugcina idinga ukuthi Deejay kwelinye amakilabhu engcono upscale ngaphezulu eThekwini.
What I would highlight: I Ezombusazwe Philosophy amakilasi great.People bathi amakilasi kulula ngempela uma kuqhathaniswa namazinga kakhulu US. Angicabangi lokhu kuyiqiniso. Kumane ezahlukene. Kukhona focus encane amamaki nokuningi yokufunda kanye nentuthuko yomuntu siqu. Ngokuvamile izivivinyo ekupheleni inkambo kukhona 60-80% of izinga lakho, ukuze ukwazi ukuthola ngokungenzi ukwenza kakhulu kunazo semester (futhi ezinzima ekupheleni). Ngacabanga wonke amakilasi wami ubuyingxenye ezingeni eliphezulu nokuzuzisayo.
What I would highlight: Futhi, isimiso Kusinda like nesimiso Isikolo samabanga aphezulu. Kukhona isikhathi 1st, inkathi 2nd, 3rd .. kwasemini (ihora lapho bonke abafundi / abasebenzi babe off for kwasemini). Ngeke ube ekilasini phakathi nawo wonke lawo nezikhathi Nokho. "
What I would highlight: Kwakuwusuku enkulu ukuba ophilayo ehhotela. Amakamelo Nokho, zifana dorm encane rooms.Breakwater Ihhotela at Gaduate School